Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? - [La-tashiga Caalamiga ah]
> Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense?
2019-04-13 2019-04-13 La-tashiga Caalamiga ah Marketing
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Shabakadaha xayeysiinta ayaa dhexdhexaadiyay Ezoic
Sida loo xareeyo barta aan lahayn AdSense
AllFeeds oo joogto ah oo kor u qaadaya marxaladda isdhexgalka
Media.net: Qeybta Qorsheynta iyo Iskuduwaha Barnaamijka
Network Shabakada Chitika Online
Sovrn: Tiknoolijiyada xayeysiinta ee daabacadaha
Criteo: Marxaladda guud ee internetka furan
Smaato: Isticmaalka Mobile Advertising iyo App Platform
OpenX: Xogta Barnaamijka | Network Ad Exchange
Kiosk - Ka bilow Mareegtadaada Kiosked
Teads: Platform Media Media
Shakhsiyaad badan ayaa bilaabay inay isticmaalaan barnaamijka Google ee barnaamijka AdSense, laakiin waxaa jira qaar ka mid ah kuwa soo ogaadey waxoogaa su'aal ah ama su'aal ahaan maaha inay ku haboontahay baahidooda gaarka ah ee barnaamijka xayeysiinta.
Noqo sida ugu wanaagsan ee loogu talagalay shakhsiyaadkaas, waxaa jira fursado badan oo AdSense ah kuwaas oo ku dadaalaya in ay iftiiminayaan qayb ka mid ah cilladeeda. Halkan waa fallaadho ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee qaybta leh sawir ku saabsan qof kasta.
Go'aankayaga: Ezoic, oo kaa ogaanaya bixiyaha ugu fiican ee xayeysiinta ah, sidaasi waxay u sii ballaarineysaa dakhligaaga.
Ezoic | Platform Intelligence Platform for Publishers
Dakhliga kobcinta dardargelinta 50-250% leh Ezoic. Mashruuca Shahaadada Google ee Shahaadada ah.
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Hawlgabka ayaa kordhaaya wada-hawlgalayaasha dhexdhexaadinta Ezoic
AllFeeds waxay leedahay tiro aan caadi ahayn oo ah kafaalo-qaadayaal online ah si ay u eegaan. Waxa intaa dheer waxa ku jira naqshado fara badan oo soo bandhigi kara. Kuwani waxay ku jiraan fiilooyinka, qabtaan, xayiraadaha XML, DHTML-pop-ups, iwm. Waxaa intaa dheer waxa ku jira faahfaahin joogto ah oo ku saabsan xaaladdaada horumarinta. Goobta ayaa kuu soo diri doonta jeeg kasta bishiiba, waxay ku siisay in aad qaadatid inta badan $ 25.00, inta aad u guureyso faa'idada bilaha soo socda ee ku saabsan fursada aad ka baxsan tahay. Wax kale oo xiiso leh oo ku saabsan AllFeeds waa in uu ku daro Google AdSense, kordhinta dakhligaaga AdSense.
Allfeeds | TALEEFINTA ARRIMAHA DIB U QAABILSAN ARRIMAHA BULSHADA EE BULSHADA
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Website-ka Allfeeds
Media.net ayaa kuu ogolaanaysa mid ka mid ah suurtogalnimada noocan oo kale ah si loo qiimeeyo qiimaha boggaaga. Waxaa intaa sii dheer inuu kuu ogolaanayaa inaad ogolaato ama diiddo wixii xiriir ah ee ka muuqda boggaaga (inkastoo xaqiiqda ah in AdSense lafteeda ay dhamaystirto shaqo aad u weyn oo tan la mid ah, kanaalka URL) Sidoo kale waxaa jira qaybo cabbir ah oo kuu sahli kara inaad fahanto sida fiican goobta ayaa sii socota. Dardar-gelinta waa wax yar oo u eg sida AdSense iyo sidoo kale waxay u dhigmaan sida fudud in la dhiso. Sidoo kale, liis gareynta wargeyska Media.net waa bilaash.
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Websiteka Media.net
Aqbali, Hogaamiyaha Suuq-geynta Shakhsi ahaaneed ee Shakhsiga ah
Ogolaanshahani waa mid u kala gooni ah sababtoo ah wuxuu kafaala-qaadayaa in uu ku soo rogo boggagaaga, kaas oo markaa loogu talagalay inuu soo saaro faa'iidooyinka ugu fiicani ee faa'iido u leh boggaaga. Waxaa intaa dheer in uu leeyahay ballan aad u ballaaran oo dhiirrigeliyayaal ah oo damaanad qaadaya in ay jiraan dad badan oo ka soo jeeda goobtaada. Noqo siduu u dhici lahaa, waxay u baahan tahay in si isdaba-joog ah loo nadiifiyo walxaha u dhow AdSense. Meelaha badankood, goobaha ugu muhiimsan waa la heli karaa oo ay fududahay inay ka bilawdo maamulkan, laakiin dhanka kale waa dhab ahaan la isku waafajin karo.
Aqbaleen | Hoggaamiyaha Suuq-geynta Shakhsiyadeed ee Shakhsiga ah
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Websaytka khadka leh
RealContext waxay isticmaashaa fikrado muuqaal ah si ay u soo kabsadaan dardargelinta ugu muhiimsan ee boggaaga. Waxaa intaa dheer, waxaa jira qayb kale oo ka dhigaya RealContext mid aad u fiican. Catchefrases waxaa lagu doortaa iyada oo ku xiran go'aamadii hore ee la bixiyay oo aan ahayn. Taas ayaa muujinaysa in ay jirto nidaam dhaleeceyn oo joogto ah kaas oo damaanad qaadaya inaad kordhiso dakhliga ka soo-baxa dakhligaaga. Waxaa intaa sii dheer in ay caqabad ku noqoto qaar ka mid ah oo ay ka mid yihiin oo ay tikneen kala saarida nabdoonaanta iyo doorashooyin badan oo dheeraad ah.
Chitika - Shabakadda Xayeysiinta Online - Meesha ay macluumaadka ku guulaysato
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Shabakada Chitika
RhythmOne waa qeyb ka mid ah bixiyeyaasha horumarinta macquulka ah. Sida AdSense, commercials ayaa diiradda saaraya weli weli halkan kuma joojin by hab kasta. Dardar-gelinta ayaa si dhab ah loo waafajin karaa, waxaad ka dooran kartaa xayaysiinta mawduuca, calanka, qaababka kareemka ah, pop-ups, pop-unders ama kor u kaca. Sidoo kale waxaad muujin kartaa dhiirrigelintaada, iyada oo loo marayo kacdoon, labadaba boggaaga iyo meelaha kale ee kabista ah, taas oo ka dhigaysa RhythmOne inay isku dhafan tahay waxqabadka joogtada ah. Waxaa jira sharaxaad joogto ah oo joogto ah oo astaan ​​ah oo astaan ​​ah iyo, sida caadiga ah ee maamullada noocan oo kale ah, bilawga bilaashka ah waa jilbaha.
RhythmOne - Guri
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Websaytka RhythmOne
Komoona wuxuu leeyahay xarumo horumarineed oo si aan fiicnaba loo hagaajin karo, oo aad adigu naftaada u fududeyn karto si sahlan u isticmaalida interface on-line. Sidoo kale waxaad heleysaa wakhtiga dhabta ah ee muuqaalka ah ee ku yaal xaafad, bog iyo dib u soo celiye. Waxaa jira isku-duwid Google AdSense sidoo kale, iyada oo loo marayo google_alternate_ad_url sidaas darteed Komoona waxaa loo isticmaali karaa bedelka Google PSA (Adeegyada Dadweynaha).
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Websiteka Komoona
Sovrn's u fasaxay inuu soo saaro qaybiyo si loo helo xayeysiis lagu aqoonsaday maadooyin ama qaybo, oo ma aha ereyga caadiga ah ee ku yaalla dallacsiinta. Goobta waxaa intaa dheer in ay dalxiisayaasha ku dhiirigeliyaan maxalliyaasha ka shaqeeya horumarinta xayeysiinta dakhliga sare. Wixii intaa ka badan, ka hadla dakhliga, qiyaasta lacagta caddaanka ah ee aad helayso waa hal-bixin aan badnayn oo ah qiyaasta lacagta Sovrn ee loo yaqaan 'Public Sovn'.
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Websaytka Sovrn
Criteo waxaa loo qorsheeyay in badan oo ku saabsan alaab-qeybiyeyaal. Waxay bixisaa awood buuxda oo ku saabsan fiirinta xayeysiisyada, cabirrada ka soo baxa fulinta guud ee guud iyo dakhligaaga wanaagsan. Waxaa loo oggol yahay in lagu qoro oo aad ku guulaysato 60% dakhliga oo dhammaystiran. Waxaad ka heli kartaa lacagta Paypal ee Baanka Bankiyada iyo (badiyaa) xawilaadaha.
Criteo: Marxaladda horumarinta internetka furan
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Bogga Criteo
Ezoic wuxuu kuu soo saari doonaa ilaa 60% qiyaasta lacagta kaashkaaga ee soo saaro. Waxa aad heshaa waa ka badan tahay AdSense, waxaad arki kartaa dakhligaaga ka jira goobtaada si tartiib ah u kora. Waxaad ku heli kartaa lacag caddaan ah oo ah lacagta PayPal ama jeeg ay si joogta ah u socoto, waxay ku siisay inaad kasbatay wax ka badan $ 50. Haddii ay dhacdo inaadan sameynin wax badan, guushaada guuleysiga ee aad gaartay wakhtiga soo socda.
Dakhliga xayeysiiska ee soo galaya 50-250% oo leh Ezoic. Mashruuca Shahaadada Google ee Shahaadada ah.
Xarunta Ganacsiga | Fikrad aad u cad oo ku saabsan horumarinta horumarka
Sida AdSense, Xarunta Ganacsiga waxay muujineysaa dardargelinta ku jirta boggaaga. Si kastaba ha ahaatee, farqiga ayaa ah sida ay dadweynuhu u soo bandhigaan booska kobcintaada, waxaad ku dammaanad qaadaysaa inaad heshay dakhli badan inta aad awooddo. Tani waxay sii kordhinaysaa dalabyada waxay kordhin doonaan kaddib markii ay qaar ka mid ah, ku guuleysteen lacag aad u badan. Sidoo kale waxaad heshaa hab aan caadi ahayn oo lagu beddelo dallacaadyadaaga si sahlan u isticmaalida qalabka iyo warbixinnada qaniga ah ee ku saabsan xaaladdaada goobta.
Xarunta Ganacsiga | Fikrad cusub oo cad oo ku saabsan xayeysi sare
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Goobta TrastDesk
Smaato wuxuu ku guuleystaa muhiimada adoo adeegsanaya kan sida ku cad shaxdaada boggaaga. Sidoo kale waxay kuu soo bandhigeysaa warbixinnada ku saabsan boggaaga iyo sida ay ugu suurtageli karto in aad ku darto dalabaadkaaga kobcinta xayeysiisyada gaarka ah ee aanad soo qaadin wax dakhli ah. Mashruucani wuxuu aasaas u yahay, sidoo kale sidoo kale AdSense iyo sidoo kale la qabsiin karo sidoo kale. Waxay xarumo iyo la qaadi karo iyo codsiyada.
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Goobta Smaato
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Bogga TripleLift
IPONWEB - Hogaamiyaha Caalamiga ah ee Tiknoolajiyada Xaqiiqada ah ee Real Time
IPONWEB kiisaska si ay u yeeshaan hal-abuur oo u-maleynaya oo fahmi kara boggaaga, iyada oo awood u siinaysa inay muujiso walaxda ugu-haboon ee boggaaga. Marka laga reebo dhiirrigelinta content, IPONWEB waxa ay muujineysaa qiimaha qiimaha isku xirka sida xayiraad ku noolaanshaha. Waa wax kasta oo ay adag tahay in la fuliyo oo uu yeesho qaab habboon.
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Goobta IPONWEB
OpenX wuxuu diiradda saari doonaa kuwa yar yar iyo kuwo dhexdhexaad ah. Waxay wax ka qabataa "Search Box" oo faa'iido leh oo weliba waxaa ku jira waxyaabo ay ka mid yihiin Tusaha Qaybta sida daaweynta 404 khalad ah. Aad bay u wanaagsan tahay in la isku duwo boggaaga isticmaalka jiheenta aasaasiga ah ee internetka.
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Goobta OpenX
Kiosk waxay ku siineysaa 65% wax ka mid ah waxa ay ka samaysanayso saxmada goobtaada. Kala-bixinta waxaa la sameeyaa bisha bil kasta, iyada oo loo marayo PayPal ama iyada oo loo marayo jeeg. Dardar-gelinta waxaa loo qorsheyn karaa sida aad rabto, Kiosk xitaa waxay bixisaa maamulka caawimaad bilaash ah shakhsiyaddeeda mana jirto wax khidmo ah oo loo baahan yahay si loo diiwaangeliyo maamulka.
Trion Interactive waxay bixisaa suurtogalnimada xayeysiisyo macquul ah oo ku saabsan bogaga firfircoon, taas oo micnaheedu yahay dardargelintu waxay bedeli doontaa marka boggaagu sameeyo. Waa wax kasta laakiin way adag tahay in la isticmaalo oo loo oggolaado in uu u heesi karo oo uu soo bandhigo qorshe toos ah. Xayaysiinta ayaa si buuxda loo hirgelin karaa warbixinnada joogtada ahna waa la heli karaa daqiiqad kasta oo maalin kasta ah.
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Goobta dareenka ee Trion
Teads waxay bixisaa fidiyeyaasha suurtogalnimada isku-duwidda xayeysiinta ee boggooda. Kuwani waxaa loo sameeyaa qiimaha shakhsiyaadka ah, oo leh bogag aad ku raaxeyso gacanta si markaa ay u muujiso dhowr nooc oo leh qorshe weyn oo dhiirigeliya. Sidoo kale waxaad leedahay xulasho ah oo ay ka mid yihiin "Your Add Here" ku soo iibso in iibsadayaashu si deg deg ah ugu faafi karaan meelaha xayaysiinta ee boggaaga. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa xiriir la leh Google AdSense, ballaadhinta CTR-gaaga iyo bixinta kafaalad qaadayaasha suurtagalnimada inay muujiyaan isku xirnaanta goobta Google AdSense. Waxaad leedahay awood buuxda oo ku saabsan aragtidaada iyo dareenkaaga ee aad ku jirto ugu dambeyntii, waxaad heleysaa 75% yaab leh waxa uu bixinayo kharashka ku baxa shay kasta.
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Teads: Platform Media Media
Sidaa darteed, sida ay tahay in la caddeeyo waxaa jira fikrado badan oo ku saabsan noocaan ah dhiirigelinta, iyo iskutallaabooyin badan oo ku xiran AdSense sida soo bandhigista. Sidoo kale, tayada dawladu waxay la shaqeyn karaan AdSense si aad u hesho dakhliga aadka u muhiimsan ee dakhligaaga xayeysiiskaaga.
Doorashada aan ugu jecelno xitaa waa Ezoic, oo maamusha tartanka u dhaxeeya dhammaan wadaagayaashan.
Waa maxay bedelka ugu wanaagsan ee AdSense? : Dakhliga xayeysiiska ee soo galaya 50-250% oo leh Ezoic. Mashruuca Shahaadada Google ee Shahaadada ah.
Beddelka AdSense, shabakada xayeysiinta, xayeesiinta internetka, shabakada internetka, Dhexdhexaadinta xayeysiiska ezoic, madadaallada blogka, ku kasbado lacag online,